सामुदायिक घाँसखेतीले फस्टायो ब्रह्मपुरको पशुपालन – Loktantra Post Loktantra Post
सामुदायिक घाँसखेतीले फस्टायो ब्रह्मपुरको पशुपालन
Published On : 16 September, 2020 7:23 pm
On : banner, उद्यम, कोरोना अपडेट, खबर, खेतीपाती, सहकारी
तरहरा, ३१ भदौ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १९ ब्रह्मपुरमा स्थानीय किसानले सुरु गरेको सामुदायिक घाँसखेतीले गाउँमा पशुपालन फस्टाएको छ ।
ब्रह्मपुर सामुदायिक बनको छेउमा रहेका २९ घर परिवारले पशुपालनका लागि जङ्गलभित्रै उन्नत जातको घाँस रोपेका छन् । उनीहरुले घाँसखेतीको सामुदायिक रुपमा हेरचाह र उपभोग गर्दै आएका छन् ।
गाईफार्म सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय दिपक रायमाझीका अनुसार ब्रह्मपुरबासीको मुख्य आयश्रोत नै पशुपालन हो । यहाँ गाई, भैसी र बाख्रापालन फस्टाएको छ । गाउँमा करीव दुई हजार खसीबाख्रा र सयौं गाईभैसी पालिएका छन् ।
घाँसका लागि खेतीबारी नभएपछि रायमाझीले नै दुई वर्ष अघि ब्रह्मपुरका बासिन्दालाई सङ्गठित गरेर जङ्गलभित्र घाँस रोप्ने योजना अघि बढाए । उनको त्यही योजना अहिले नमुना बनेको छ । गाउँलेहरुले ब्रह्मपुर घाँस विकास स्रोत केन्द्र नामक संस्था स्थापना गरेका छन् भने केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उनलाई नै चयन गरिएको छ ।
सामुदायिक बन समितिसँग पाँच बिगाहा जग्गा निःशुल्क मागेर केन्द्रले १३ जातको कोसे, अकोसे र डाँले घाँस हुर्काएका छन् । हरेक सदस्यलाई दुई कठ्ठादेखि सात कठ्ठासम्म जमिन केन्द्रले उपलब्ध गराएको छ, त्यहाँ उन्नत जातको घाँस रोप्न लगाइएको छ ।
घाँसखेतीमा स्टाइलो, मेन्दुला, भट्मासे, ज्वाइन्टभेज, बदामे, इन्दुलगायतका कोसे घाँसबाली र मलोसेस, सुपर नेपियर, मुलाटो, सुम्बा सेटेरियालगायतका अकोसे घाँसबाली हुर्काइएको छ । हिउँदमा जैघाँस, भेज, चावली, बर्सिमलगायतका घाँस रोप्ने गरिएको छ ।
सामुदायिक रुपमा हेरचाह र लगानी गर्न लगाइए पनि उपभोग आफ्नै मर्जीले गर्न पाइने भएकाले सदस्यहरु घाँसखेतीमा मरिमेटेर लागेका छन् । हरेक दिन ५० भारीभन्दा बढी घाँस जंगलबाट घर ल्याइने गरेको छ ।
ब्रह्मपुरका अधिकांश बासिन्दा एक कठ्ठादेखि तीन कठ्ठा जग्गामा घरगोठ बनाएर बस्दै आएको र जीविकोपार्जनका लागि पशुपालन नै उनीहरुको मुख्य पेशा भएको ब्रह्मपुर घाँस विकास स्रोत केन्द्रका सदस्य दिलबहादुर न्यौपानेले बताए ।
‘गाई, भैसी र बाख्रा नपाली परिवार पाल्न सकिने अवस्था छैन,’ दुई दर्जन खसीबाख्रा र एक माउ भैसी पालेका न्यौपानेले भने, ‘घर बनाउने जग्गा नै थोरै भएका बेला जङ्गलको घाँसखेती हामीलाई बरदान भएको छ ।’
आफ्नो चक्लाको घाँस अर्कोले चोरी नगरोस् भनेर संस्थाले जरिवानाको व्यवस्था समेत गरेको छ । घाँस विकास स्रोत केन्द्रका सदस्य राजु चौधरीका अनुसार पहिलोपटक अर्काको घाँस चोरी गरेको फेला परे सम्झाई बुझाई गरिने र दोस्रोपटकमा रु. ५०० जरिवाना तिराइने नियम लागू गरिएको छ । तेस्रोपटक र त्यसभन्दा बढी जतिपटक घाँस चोरी हुन्छ, त्यति नै दोब्बर जरिवाना असुल गरिने त्यहाँको नियम छ ।
पशुपालनका लागि जङ्गलको सामुदायिक घाँसखेती बरदान सावित भए तापनि पशुपालक किसानहरुलाई आधुनिक तालिम र अनुदानको भने खाँचो देखिएको छ । घाँसखेती गरिएको स्थान जङ्गलभित्र रहेको हुँदा त्यहाँ घेराबेरा र सिञ्चाई सुविधा समेत आवश्यक देखिन्छ ।
‘इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुरुमा घाँसको उन्नत बीउ दिएको थियो,’ घाँस विकास स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष रायमाझीले भने, ‘हाम्रो समृद्धि भनेको यही पशुपालन हो, स्थानीय सरकारले सिञ्चाई, घेराबेरा र अनुदानको व्यवस्था गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा छौं ।’
घाँसखेतीका लागि स्थानीयलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने र उपभोग गरेर उब्रिने घाँस विक्री गरेर आयआर्जन वृद्धि गर्न पाइने भावी योजना अघि बढाइएको उनले बताउनुभयो ।